Gudoomiye ku Xigeenkii Gobolka Banaadir oo ku dhintay Qaraxii Hotel Centeral+Cod | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Gudoomiye ku Xigeenkii Gobolka Banaadir oo ku dhintay Qaraxii Hotel Centeral+Cod
Warar dheeraad ah ayaa waxa uu kasoo baxayaa Qarax xoogan oo goor dhow ka dhacay Hotel Centeral ee Magaalada Muqdisho kaasi oo la sheegay in loo adeegsaday Gaari nooca raaxada ah oo laga soo buuxiyay walxaha Qarxa iyo Qarax kale oo isna la sheegay inuu fuliyay ruux isa soo miidaamiyay.
Warar hor dhac ah ayaa sheegay in Qaraxa uu ku dhintay Gudoomiye xigeenka dhanka Siyaasadda ee Maamulka Gobolka Banaadir Maxamed Aadan Guuleed (Caano Geele) iyo sidoo kale Xildhibaan Xildhibaan Cumar Cali Nuur (Cumar Furdug).sidoo kalane uu dhaawac kasoo gaaray Xildhibaano ay kamid ahaayen C/qaadir Cali Cumar, iyadoona warar qaar ay dheegayaan in dadka dhintay iyo kuwa dhaawaca ah ay kamid ahaayen Mas’uuliyiin kale.
Sidoo kale, wararku waxa ay intaa kusii darayaan in Qaraxa uu waxyeelo kala duwan kasoo gaaray Qaar kamid ahaa Shaqaalaha Hoteelka iyo dad shacab ahaa oo goobta ku sugnaa, walow aan weli helin magacyadooda iyo tirada ay gaarayaan dadkaasi.
Ciidamo ka tirsan Dowlada Soomaaliya iyo Saraakiil ayaa goobta uu qaraxa ka dhacay gaaray waxana soconayaa baaritaano ay sameeynayaan Ciidamada Booliska iyo kuwa nabad sugida ee Dowlada Soomaaliya.
Gudoomiyaha Degmada Xamar weyne C/qaadir Maxamed C/qadir ayaa sheegay iney socdaan baaritaano kala duwan isla markaana ay la wadaagi doonaan Warbaahinta baaritaanka ka dib.
Qaraxaan ayaa ku soo aadaya iyadoo inta badan wadooyinka muhiimka ah ee magaalada Muqdisho ay xiran yihiin, isla markaana magaalada ay ka socoto diyaar garow lagu soo dhoweynayo Madaxweynaha Jabuuti iyo madax ka socota Maamulada Soomaalida.